Isisombululo Sabantu / Inkqubo Yokukhusela Abasebenzi (eSingapore)
Amanethiwekhi aKhuselekileyo aKhuseleko - Qinisekisa ukuba uyayilumkisa ukuba umqeshwa unobungozi
Isicatshulwa esifihlakeleyo seLizwi
ICare 3.0 -Indlela yeNdoda ePhantsi-Isisombululo soKhuseleko lwaBasebenzi esiBodwa
Ukutyibilika, ukuhamba kunye nokuwa zezona ndlela ziphambili zeengozi zomsebenzi ezenzeka kumashishini amaninzi. Nokuba liwehla ukusuka phezulu okanye ukugqobhoza iintambo, ezo ngozi zinokubangela ukwenzakala kakhulu, kwaye kwiimeko ezigqithisileyo, nokufa kwabantu. Ukwazi kwangoko xa isigameko esinjalo sisenzeka kunokuvumela abaqeshi ukuba bakhawuleze ukubiza uncedo lwezonyango kunye nokukhusela iimeko ezibucayi. Oku kubaluleke ngakumbi kwiimeko apho abasebenzi basebenzela bodwa kwindawo engayodwa, ngaphandle kwamehlo. Banokukufumanisa kunzima ukubiza ingqalelo xa kunesidingo xa benzekile, kwaye ke, umntu wehlisa ii-alarms kunye nezixhobo zisebenza njengesisombululo esidumileyo sezo meko.
iCare 3.0 Employee GPS Tracker Device Inokujonga imeko yomqeshwa-okwenyani. Xa kukho ukuwa, ICare 3.0 inokwenza ngokuzenzekelayo isilumkiso kwifowuni yomnye umntu, ukuze uncedo lubonelelwe kwangoko
Umsebenzi unokwenza iminxeba okanye athumele izilumkiso nakwizaziso kwisuphavayiza kwimeko yemeko kaxakeka.
Kubasebenzi abasebenza kwicandelo elinobungozi kakhulu njengokwakha, izixhobo zendalo, ezempilo, ukunyanzeliswa kunye nokuhamba, i-Aware 360 ​​inikezela ngezisombululo ezizeleyo kubasebenzi ukuqinisekisa ukuba wonke umsebenzi unokufumana uncedo okanye uncedo lwezonyango xa lufuneka kakhulu. Nokuba zii-satellite (GPS) izixhobo zokusebenza, ii -apps ze-smartphone okanye ezinye izinto ezinokugqalwa, siqinisekisa ukuba itekhnoloji elungileyo isetyenziselwa imeko nganye eyodwa.
Isetyenziselwe kakhulu i:
- Abasebenzi bodwa
Abasebenzi kwiiNdawo ezinobungozi
- Abasebenzi abakude
1. Ubungakanani obuncinci, i-IPX7 engenamanzi, ukutyabeka ngerabha, uziva ukhululekile.
2. Iqhosha elilula le-SOS lokuvula iqhosha.
Ukukhawulezisa ilizwi xa ialam ishukunyiswa kunye nomsebenzi wokukhumbuza.
4. Ukufowuna ngeendlela ezimbini.
5. Ukulandelwa kwangaphandle kwe-GPS kunye ne-BLE / WIFI yokulandela ngaphakathi.
6. Isikhululo sokumisa iinqwelo-mafutha sibonelela ngokubiza ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyisebenzisa.
7. Fall down alarm for workers and employees.
8. I-alamu yendawo ekhuselekileyo ye-Geo, intshukumo / akukho alarm yokuhamba njl.
9. Intshukumo eyakhelwe-ngaphakathi kunye nesenzi sentshukumo.
10. BLE 5.0 unxibelelwano.
11. Phinda ulayishe idatha yendawo engaboniyo.
12. UBX ubuchwepheshe beGPS.
13. Ukuchaneka okuphezulu kweGPS kunye nenkxaso yeAGPS.
14. IOS / Android APP + inkonzo yokujonga iWEB.
15. FOTA (Uphuculo lweFirmware ngaphezulu komoya).
16. Ubunzima obuncinci kunye nokukhanya, kuphela yi-1.4 oz.
Ukufunyanwa kokuwa kunye nokuKhangela okungashukumiyo
Worker is able to communicate with their incharge with a press of a button during an emergency.
Ukulungele ukubeka-ngokulula kunye nokuSebenza (4 umbala)
Ukusetyenziswa kwewebhu kunye neselfowuni ngeqonga lokulandela umkhondo kuya kubonelelwa. Ungajonga indawo ekuyo isixhobo (indlela yezembali / ixesha lokwenyani) kunye nePC yakho, iThebhulethi okanye iSmartphone.
Ukubalula ngokubanzi imodeli IGPS050D
Dimension 2.4*1.7*0.6 inches / 61mm*44mm*16mm
ubunzima 1.4 OZ / 40g
Ibhetri yokugcina Inokutsha kwakhona, i-3.7V, i-850mAh
Ukutshaya umbane 5V DC
ngamaqondo yokusebenza -20 ° C ukuya kwi-80 ° C yokusebenza
-30 ° C ukuya + 70 ° C yokugcina
ubomi bebhetri Ukufikelela kwiiyure ezingama-72 phantsi kwesiqhelo
isibulali woluvo Ishukumisi kunye nentshukumo yentshukumo
Baxhasi 4 I-Pin-Magnet yokutshaja
Slot khadi slot Na-no SIM card
Imemori yefowuni 1MB
Imakrofoni eyakhelwe-ngaphakathi kunye nesithethi
Львів, I-802.11 b / g / n, 2.4G
IPHUPHA BT5.0 LE
IGPS GPS chipset Ubx M8130 (inkxaso ye-AGPS)
inkxaso IGPS kunye neGlonass
Ukufumana rhoqo 1575.42MHz
Ukuqala okubandayo malunga nama-26
Ukuqalisa kobushushu malunga nama-2
Isiqalo eshushu malunga nama-1
eriyali I-eriyali eyakhelwe-ngaphakathi yodongwe
IHelp Indoda yeNkqubo ePhantsi-uLuhlu lwabaThengi boKhuseleko lwaBasebenzi abaLodwa
Izisombululo ze-OMG-Umxhasi-abaQeqeshi boKhuseleko abucala
175 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-90 Namhlanje
Ukukhuseleka kwabasebenzi yedwa: Ixesha lokufumana iNgxaki
Umsebenzi ohamba yedwa ngumsebenzi owenza umsebenzi owenziwa yedwa kwabanye abasebenzi ngaphandle kokujonga okanye ukujonga ngqo. Abasebenzi abanjalo banokuchaphazeleka emngciphekweni kuba kungekho namnye ukubanceda. Ukuba wedwa ngokwendalo kubeka umntu isikhundla kunye namabala apho unokuxhomekeka kuwe kuphela, kwiimeko zengozi okanye iingozi zihlala ziyingozi kuba uwedwa kwaye kufuneka uzinakekele.